Ndị nkwado - BullyingCanada
BullyingCanada daalụ òtù ndị a na-emesapụ aka pụrụ iche maka nkwado ọhụụ na ọmịiko ha.
Daalụ ndị na-enye onyinye mmesapụ aka maka nkwado ha pụtara ìhè BullyingCanada.
Nkwado ego na ụdị dị iche iche nke òtù ndị a na-enye na-ekere òkè dị mkpa n'ikwe ka anyị zaa ọtụtụ narị puku oku enyemaka anyị na-enweta kwa afọ site n'aka ndị ntorobịa a na-emegbu onwe ha na ndị okenye na-eche banyere ha.
Ọ bụrụ na-amasị gị ịmụta ka esi akwado BullyingCanada-ma n'onwe ma ọ bụ dị ka otu-anyị na-akpọ gị òkù ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụ inyocha ibe anyị itinye aka.
Ndị nkwado anyị bara uru
Otu onye ndu
Ụlọ ọrụ ndị a na-enye nkwado dị egwu site n'inye ngwaahịa na ọrụ onyinye BullyingCanada.
Ebutere webhosting site na Kualo.
Enwere weebụsaịtị jikọtara yana site na saịtị a nke arụnyere ma ọ bụ mepụta ma ọ bụ maka ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ndị na-abụghị ndị mmekọ. BullyingCanada. Ndị otu a, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu na-ahụ maka ọrụ na ozi (gụnyere ikike igosipụta ozi dị otú ahụ) dị na weebụsaịtị ha. Njikọ na ma ọ bụ site na saịtị a apụtaghị n'akụkụ nke BullyingCanada nkwado ma ọ bụ nkwa ọ bụla nke otu ma ọ bụ ozi ọ bụla (gụnyere ikike igosipụta ozi dị otú ahụ) achọtara na webụsaịtị ha.
BullyingCanada anaghị eche na ọ bụghị maka ụgwọ ọ bụla maka ijikọ nke ọ bụla n'ime saịtị weebụ ndị a jikọtara, iji saịtị ejikọrọ maka ikenye ma ọ bụ kesaa ọdịnaya, ọrụ ma ọ bụ ọdịnaya (gụnyere ikike igosipụta ozi dị otú ahụ) nke ọ bụla n'ime webụsaịtị ejikọtara, ma ọ bụ maka ozi ọ bụla, nkọwa, nkwupụta ma ọ bụ echiche ekwuputara na weebụsaịtị ọ bụla ejikọtara. A ga-eduzi nkwupụta ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla gbasara webụsaịtị ejikọtara na otu ụlọ ọrụ nke a na-arụ ọrụ webụsaịtị ahụ.
Ozugbo ị hapụrụ BullyingCanadawebụsaịtị, BullyingCanadaAmụma nzuzo adịghịzi emetụta.